परिवार दलले केपी ओलीको साथ छाडेको छैन, तत्काल छाडदैन पनि | नेपाल आज
शनिबार, १६ बैशाख २०७४ गते प्रकाशित
–एकनाथ ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल परिवार दल परिवार दललाई सरकारको गठबन्धनमा आउनू भनेर निम्तो गरिएको थियो । यो निम्तोको अर्थ हामी पनि राष्ट्रहित विपरीतको संविधान संशोधनमा कांग्रेस माओवादी झै सति जानु भन्ने थियो । निम्तो आयो भन्दैमा हामीले मानेको होइन । पार्टीले निर्णय गरेको छैन । संविधान संशोधनकालागि अहिले जस्तो प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो प्रस्तावमा परिमार्जन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ । यदि अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन भएर राष्ट्रहित नगर्ने प्रावधान हटाइयो भने हामी संशोधनको पक्षमा जान पनि सक्छौं । तर अहिलेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा हामी जान सक्दैनौं ।
परिवार दल एमालेको मोर्चाबाट सरकारी मोर्चामा गएको भनेर आएका खबरहरु गलत हुन् । अहिलेसम्म परिवार दल नेकपा एमालेको मार्चामा छ ।
अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा छैन । राष्ट्रको हितमा नभएको प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा आदि लागि परेका छन् । मधेसी मोर्चाको त के कुरा गर्नु । यो मोर्चाले त राष्ट्रहित पनि हेर्दैन, मधेस हित पनि हेर्दैन ।
प्रदेशहरुको सीमांकन फेरबदल गर्दा सम्बन्धित अर्को प्रदेशको सहमति नचाहिने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ । यसो गर्दा त सम्बन्धित प्रदेशका जनताको अधिकार पनि खोसिन्छ । जनताको अधिकार खोस्ने संशोधन प्रस्तावमा कसरी सहमत हुन सकिन्छ ? यदि यस्तो भयो भने जो कोहीले सीमांकन फेरबदल गर्नु पर्यो भनेर माग राख्छन् । आन्दोलन गर्छन । यो राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा पनि छैन ।
अब भाषाको कुरा गरौं । सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा विभिन्न भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ । नेपालमा मुख्य भाषालाई छाडेर अर्को कुनै भाषालाई पनि अनुसूचीमा राख्ने तयारी हो यो । घुमाउरो पारामा यो भाषाको खेल डरलाग्दो छ । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मधेसका जनता हुनेछन् । मैथली, भोजपुरी, अवधी भाषा सकेर अर्को भाषा स्थापना गर्ने खेल हो । यो खेलमा नेपालको सरकार नै लागिपरेको छ ।
नेपालको संविधानले राज्यको प्रमुख नौ पदमा अंगीकृत नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । यस्तो व्यवस्था संसार भर हुन्छ । अंगीकृत भनेका विदेशबाट आएकाहरु हुन् । हामीले त सुरुमा नेपालकै धर्ती पुत्रहरुको पो अधिकारको निश्चितता गर्नु पर्ने हो । तर यहाँ त बाहिरबाट आएकाहरुलाई अधिकार दिनु पर्छ भनेर बहस भइरहेको छ । राज्यका प्रमुख नौ पदमा जान अंगीकृतलाई लगाइएको रोक संशोधन गर्ने तयारी छ । नौ भन्दा पनि कम पदहरुमा मात्रै अंगीकृतलाई रोक्ने बाँकी सबैमा दिने भन्ने योजना हो यो । आफ्नो देशै विदेशमा जन्मेको नागरिकलाई सुम्पिने संशोधन हामी कसरी मान्ने ? सवाल नै पैदा हुँदैन ।
अहिलेको संविधानमा नेपालमा विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे पछि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर पहिलेको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बित्तिकै नागरिकता हातमा राखिदिने भन्ने छ । अन्तरिम संविधानमा यस्तै थियो भन्ने तर्क गरिन्छ । अन्तरिम संविधान नै मन परेको हो भने किन चाहिएको त हामीलाई नयाँ संविधान ? नेपालमा जे जस्तो गतिविधीहरु अहिले देखा परेका छन् ती गतिविधिका बाहिरी र भित्री पाटाहरु फरक छन् । दृश्य र अदृश्य शक्तिले नेपालको संविधान संशोधन गरेर नेपालको हित विपरीत कार्यहरु गराइरहेको छ ।
कसैलाई प्रधानमन्त्रीको पद मुखैमा आइसकेको छ । देश भाँडमै जाओस्, संविधानमा जे सुकै लेखियोस्, तर प्रधानमन्त्री चाहीँ बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर नेताहरु परिचालित भएका छन् ।
राष्ट्रकै हित विपरीत संविधान संशोधन हुन हुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसमा धेरै सांसदहरु छन् । तर के गर्नु उनीहरु पार्टीको निर्णयविपरीत बोल्दैनन् ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठकमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गराउने, मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने बहानामा एमालेलाई धेरै टाढा नधकेल्नुस भन्ने सुझाव दिएँ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन भए पनि केही छैन तर चुनाव गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । तर अब समस्या के छ भने संविधान संशोधन नभइ चुनाव हुने अवस्था पनि छैन । राष्ट्रहितविपरीत संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन गाह्रो छ ।
मलाइ अहिले लागेको एक शंका पनि छ । त्यो के भने कांग्रेस, एमाले माओवादी मिलेर मधेसी मोर्चालाई नंग्याउन खोजेको त हैन ? यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भएन भने एमाले खुसी हुन्छ । प्रस्ताव पास नभए पनि चुनाव भयो भने माओवादीले चुनावको जस लिन पाउँछ । चुनाव भयो भने सत्ता हातमा आउँछ कांग्रेस पनि खुसी हुन्छ । यस्तो भयो भने नांगिने मधेसी मोर्चा हो ।
राष्ट्रको हित नहुने र मधेसी जनताको हितमा पनि नभएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भएन भने मधेसी मोर्चा आन्दोनलको चरम उत्कर्षमा जान सक्छ । जस्ता शक्तिसँग पनि मिलेर राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्याउने सम्भावना पनि छ । त्यस्तो हुँदा थप अशान्ति हुन्छ । राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । मोर्चाको माग पूरा गर्दा पनि राष्ट्रियता त कमजोर नै हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा बाहिर जे देखिन्छ भित्र त्यो हुँदैन भन्ने कुरा त थ्रेस होल्डको विषयले पनि स्पष्ट पारिदियो । कुनै विदेशीले धेरै पहिलेदेखि मधेसी दलहरु एक होउन र नेपालको हित विपरीत त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्न पाइयोस भन्ने चाहना राखेको थियो । तर त्यो पूरा भइरहेको थिएन । त्यही शक्तिले तीन प्रतिशत र एक सिटको थ्रेस होल्ड रादिदियो । त्यति भएपछि मधेसी दलहरु मिल्न बाध्य भए । यसबाट नेपालकै, नेपाली माटोकै, नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डताको पक्षमा रहने साना राजनीतिक दलहरु संकटमा परेका छन् । (अध्यक्ष ढकालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)